ကျွန်မ ၏ မပွေလီလီ – Lily | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ကျွန်မ ၏ မပွေလီလီ – Lily	41
ကျွန်မ ၏ မပွေလီလီ – Lily
Posted by ဇီဇီ on Jun 11, 2015 in Photography | 41 comments
စကားမစပ် ဂျူးရဲ့ “ကျွန်မ ၏ သစ်ပင်” ထဲက ဇာတ်ကောင် နာမည်က လီလီ ဆိုလားလို့။
သူ့ရဲ့ အနံ့ကို အရမ်းကြိုက်တယ်။
လီလီ က မင်းသား ရဲ့ ဂီတာလေးနာမယ်။
မင်းသမီး က … ဇော်။ နီနီဇော်။
အဲဒီ စာအုပ် ကို မကြိုက်ခဲ့ဘူး။
လီလီပန်းလေးများ သက်သေတည် ကတော့ …. :-)))))
ပုံ(၁) ကို အကြိုက်ဆုံး။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျနော် လည်းး အဲဒီ စာအုပ် ကို ဘယ်ချိန် ဖတ်ဖတ် မကြိုက်ဘူးးး
အသက် ၄၀ ကျော် မှ ပြန်ဖတ်ရင်တော့ မသိဘူးးးး
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ချေးကားတိုက်ပါဇီ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပိုက်ဆံ ထုတ်ချေးးမယ့် ကားးးလားးး
Ma Ma says: အဲဒီပန်းကို အတုပဲမြင်ဖူးလို့ မကြိုက်ဘူး။
ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ပန်းအစစ်ကို မြင်ဖူးချင်မိတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီမှာ ပုံ ၂ မှာ လိုမျိုးး ၄ ပွင့်လောက် ပါတဲ့ တစ်ခက် ကို $7 ရှိတယ်…
တစ်ပတ် ၁၀ရက်လောက် အိမ် မှာ မွှေးးးနေတာပဲ..
ကြောင်ဝတုတ် says: နောက်တစ်ခါလာရင် ၀ယ်ခဲ့စမ်းပါအေ….
အထဲက ၀တ်ဆံကို မက်ခရိုရိုက်ချင်လို့….ဟိ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဝတ်ဆံပဲ ဘူးနဲ့ ထည့်သယ်ခဲ့ရမားး??
ကြောင်ဝတုတ် says: ၀တ်ဆံကို ဘူးနဲ့ထည့်သယ်လာမှတော့ နင်လာတဲ့အထိမစောင့်တော့ဘူး…
မီးဖိုချောင်ထဲက နနွင်းပုလင်းပဲယူပြီးရိုက်လိုက်တော့မယ်… ဟိ
ကြည်ဆောင်း says: လီလီပန်းရဲ့ အမွှေးနံ့ လေးက ရင်အေးတယ်
တစ်ခါတစ်လေ မမွှေးတဲ့ အတု နဲ့ မိရင်တော့ တော်တော်စိတ်တိုရတယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခတ္တာ နောက်တစ်မျိုးရှိတယ်။
Ma Ei says: အရောင် အသွေးစုံ ပွင့်ပုံလှတဲ့ လီလီပန်း အရမ်းကြိုက်..ချစ်လဲချစ်…
ဘုရားပန်းလှူထားရင် တစ်အိမ်လုံးကို မွှေးနေတာပါဘဲ…
၀တ်ဆံကတော့ ထိမိတာနဲ့ အရောင်စွန်းလို့ သတိထားရတယ်…
နန္ဒ၀န်ဈေးမှာ ၇ ပွင့် ဂ ပွင့်ပါတဲ့ အခက်ကြီးတွေရတတ်တယ်…
ဗဟန်းဈေး၊ အင်းလျှားလမ်းဈေးမှာ အရောင်စုံရှိတယ်…
ခုတော့ ဆွိရဲ့ လီလီတွေမြင်ပီး အခင်းလိုက်ကို စိုက်ချင်နေပီ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: မြင်ဖူးသမျှတော့၊
ပန်းရောင် က အမွှေးဆုံးလိုပဲ။
aye.kk says: လီလီကလှတယ်၊
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပထမဆုံးပုံ က ဘုရားတင်ထားတဲ့ အဖူးကို ရိုက်ထားတာ တီအေးးး
တောင်ပေါ်သား says: အဲဒီပန်းတော့ သိဘူးဗျ ၊
ဇီဇီခင်ဇော် says: မွှေးလည်း မွှေး
Wow says: ပန်းခင်းကြီးက လှလိုက်တာ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခူးရောင်းပစ်ချင်စရာကြီးနော်
Alinsett @ Maung Thura says: အရီးပြောသလိုပဲ…
“ကျွန်မ ၏ သစ်ပင်” ထဲက ဇာတ်ကောင် နာမည်မဟုတ်…
ဇာတ်ကောင်မင်းသားလေးရဲ့ ဂစ်တာလေး နာမည်က … လီလီ .. ဂျူးရဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ
ကျွန်တော်ဆိုပြီး နာမ်စားသုံး ရေးထားတဲ့ ရှားပါး စာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ်… သတိတရ ရှိနေတဲ့ စာအုပ်လေး..
ကျနော်လည်း အဲ့ စာအုပ်ကို ဂျူး ထဲမယ် မကြိုက်ဘူး။
ဂျူးရဲ့ စာအုပ်တွေထဲမယ်..ဖန်တီးမှု အား အရ… ချစ်သူရေးတဲ့ ညတွေ ကို အကြိုက်ဆုံး… —————-
ပန်းလေးတွေက လှလိုက်တာ… မစားဖူးပေမယ့်… ပန်းတွေကို ကျွန်တော် ဆာတယ်..ဆိုတဲ့ ..
တာရာမင်းဝေရဲ့ စာသားကိုတောင် သတိရမိသေး..
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ကြောင့် အသက် ၄၀ ကျော် မှ ပြန်ဖတ်မို့ပါဆို
​ဒေါ် လေး says: ပန်းတွေက အကုန်လှတယ်
ဂျူးစာအုပ်တွေ ထဲ အဲဒါကို မကြိုက်ခဲ့ဘူး
ဒါမယ့် ခုတော့ စိုးသူနဲ့ စိုင်းစိုင်း ပြန်ရိုက်မယ်လိုလို ကြားတော့
မြစပဲရိုး says: အလိုလေး။ ဒွတ်ခ။ (ခွက်ဒစ် – မွသဲ)
ဒါဆို မင်းသမီး က စိုး ဘဲ ဖြစ်ဦးမလား။ :-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရဲတိုက် ဆို တော်သေးးးး
မြစပဲရိုး says: ကျုပ် ချစ်တူမ အသံပျောက်။
ပိတ်ရက် ဘာတွေ အလုပ်များနေတုန်း။ :-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဖလူ မို့ မ ဖလမ်း နိုင်..!!
kai says: ဦးကျေက်တုံးလည်းဖလူနေတယ်..
ဟိုမှာ.. MERS ကဟောင်ကောင်သမားတွေဆီရောက်တယ်သတင်းတက်တာမို့.. စိတ်တောင်ပူလိုက်သေး..။
RITဆင်း.. ဆယ်လီဘရိတ်တီ..။ စာရေးဆရာ..စသဖြင့်နာမယ်ကြီးတွေစာရင်းပြုစုနေတာ..
မြစပဲရိုး says: မင်းဦး
မြစပဲရိုး says: မမ
မြစပဲရိုး says: မစန္ဒာ ( ဂျီ ဟောသူ) :-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဥဥ ခိုင် Kai
Ma Ma says: ကိုကို (စက်မှုတက္ကသိုလ်)
မြစပဲရိုး says: သန်းတိုးအောင် :-)))))))))))))
မြစပဲရိုး says: ဖလူ ???? ဘာတုန်း :-)))
မြစပဲရိုး says: Ohh … I see.
Wishing you get well soon. Take care my dear!
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရီလိုက်ရတာချွေးးတွေပြန်..!!
Mike says: .သွားလေသူခင်မောင်တိုး
.သမန်းကျား ကိုမြင့်
manawphyulay says: ဒါနဲ့ မောင်ဂီရဲ့ ကောင်မလေးနာမည်ကလည်း လီလီပါသလားလို့လေ… ဟုတ်လား မဟုတ်လားတော့ မသိ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟမ်??
အဲဒီနောက် ဘယ်၂ယောက် ပြောင်းပြီလည်းကို မမှတ်မိတော့။
အောင် မိုးသူ says: တကယ်နာမည်က လီလီပေါ့နော်။ ဒီမှာတော့ နှင်းပန်း။ မြန်မာခတ္တာကတော့ ပွင့်ဖတ်မျှင်မျှင်လေးတွေနဲ့ပေါ့ ၀ါခေါင်လဆို ခတ္တာတွေပွင့်ပြီ။ လေးကျွန်းကြာခိုင်နဲ့တော့ လီလီက အမျိုးတော်မယ်ထင်တယ်။
ခတ္တာက မျှင်လေးတွေ နဲ့ အများကြီး ခွဲပြီး တစ်ခိုင်တည်းမှာ ပွင့်တာနော်။
လေးကျွန်း ကြာခိုင် ရော လီလီ ရော ခတ္တာ မျိုးလို့ မှတ်ထားတာ။